“Way cadahay inaanan dhihi karin waxaan la mid nahay Liverpool.” – Paul Pogba – Gool FM
Dajiye January 15, 2021
(Manchester) 15 Jan 2021. Ciyaaryahanka qadka dhexe kooxda Manchester United ee Paul Pogba ayaa sheegay in Red Devils aysan ku heer aheyn kooxda difaacaneysa horyaalka Premier League ee Liverpool.
Dhinaca kale laacibka reer France ee Paul Pogba ayaa muujiyay in labada kooxood ee Liverpool iyo Manchester United laysla barbardhigi karo marka ay Red Devils hanato horyaalnimada.
Tartanka loogu jiro hanashada Premier League ee u dhexeeya Liverpool iyo Manchester United ayaa cirka isku shareeray, kaddib markii ay Red Devils ay kaalinta koowaad ka gashay miiska kala sareynta ee horyaalka.
Taageerayaasha kubadda cagta ayaa sugaya isbuuca 19-aad ee horyaalka Premier League, maadaama ay wada ciyaari doonaan kooxaha Liverpool iyo Manchester United, waxaana si weyn loogu go’aamin doonaa kulankan tartanka loogu jiro hanashada horyaalnimada ee xilli ciyaareedkan.
Haddaba Paul Pogba ayaa yiri kahor ciyaarta ka dhici doonta Axada garoonka Anfield:
“Wax badan ayaanu horumar samaynay, waanu sii wadaynaa horumarka, laakiin wali waxaan haysanaa koox aad u da’ayar ah.”
“Way cadahay inaanan dhihi karin waxaan la mid nahay Liverpool, sababtoo ah si fudud ayeey ugu guuleysteen horyaalka, waxayna sii wadeen guushooda, sidaas darteed maalinta aan ku guuleysano horyaalka, kaddib waxaan dhihi doonaa isku heer ayaan nahay.”
“Haddii aad rabto inaad noqoto kan ugu fiican, waa inaad ka adkaataa kan ugu fiican.”
“Waxaan dooneynaa inaan ku guuleysano horyaalnimada, waan ognahay inay dhib noqon karto, laakiin kaliya waa inaan diirada saarnaa oo aan isku daynaa inaan sii joogno meesha ugu sareysa, waxaana aaminsanahay inaan ku guuleysan karno horyaalnimada haddii aan diiradda saarno.”